Raha naverina tamin’ny laoniny teto an-tany ny Fiangonan’i Jesoa Kristy 183 taona izay, dia nanakoako tamin’ny asa nomen’ny Tompo ny vondrona mpianatra keliny ireo teny nolazainy an-jato taonany lasa: “Ary hiantefa amin’ ny olon-drehetra.”5 “Satria marina tokoa fa tsy maintsy miala avy eo amin’ ity toerana ity ny feo ka mankany amin’ izao tontolo izao ary hatrany amin’ ny faran’ ny tany.”6
“Amin’ny olombelona rehetra”? “Amin’izao tontolo izao”? “Amin’ny faran’ny tany”? Ho tanteraka ve izany?
Nankahery ny Olomasin’ny Andro Farany ny Tompo,7 kanefa afaka nahafantatra mialoha ny vokatra sy ny hoavin’ity asa mahatalanjona ity tokoa ve izy ireo? Mety nanontany tena izy ireo raha toa ka tena hisy fahagagana hiaraka amin’izy ireo eo am-panaparitahana ny filazantsara.
Nandresy ny ahiahy indray ny finoana, ary an’arivony no vita batisa. Tany Angletera, ny Loholona Wilford Woodruff dia nahita mpiray tanàna iray manontolo izay niandry ny fahatongavany. Tonga tamin’izy ireo ny Fanahin’ny Tompo, ary nanao batisa mpitory teny 45 sy mpikambana an-jatony maro izy nandritra ny volana voalohany tao amin’ny toeram-piompian’i Benbow.8
Mitovy amin’izany ny androntsika. Fony misiônera izahay sy ny Loholona David A. Bednar 40 taona lasa eo ho eo izay (mampanantena anareo aho fa tsy izahay no misiônera niverina antitra indrindra mipetraka eto amin’ny seza menamena), dia nisy misiônera 16.000 tamin’izany. Araka ny tatitra nomen’ny Filoha Thomas S. Mon